File VOB A (Video UJEEDDO) waa qaab weelka ee DVD-Video warbaahinta, taas oo ka kooban waxyaabaha Video dhabta ah, Audio, Cinwaan, iyo Menu ah. VOB ku salaysan yahay MPEG-2 qaab il barnaamijka, laakiin la dhaafi karin dheeraad ah iyo caddaymaha. Waqtigan xaadirka ah, ay loo maqli karo ee codsiyada iyo aaladaha waa arrin ku kooban oo keliya VLC, Mplayer ciyaartoyda caalamiga ah sida, ama Windows Media Player (laakiin ma Windows 8) iyo ciyaartoyda DVD joogto ah. Haddii aad loo isticmaalo in lagu feature Lugood ah oo doonaya in ay soo dhoofsadaan files VOB si aad u Lugood, sidoo kale waxaa jira xal smart: diinta files VOB si aad u Lugood qaab saaxiibtinimo, sida M4V, MOV ama MP4.
Qeybta 1: Hel Best & Professional VOB in ay Lugood Converter
Qeybta 2: VOB Free in Lugood Converter
Qeybta 3: VOB Online in Lugood Converter
Si loogu badalo VOB in Lugood muuqan iyo effortlessly, Wondershare Video Converter waa waxa aad u baahan tahay. Waxay bixisaa degdegsiimo leh u helidda sare-u qalma oo si sahlan loo maareeyay diinta iyo diinta ka files DVD VOB in kasta oo gebi ahaanba qaabab video, version SD iyo version HD. Dhanka kale, waxa ay si toos ah u bixiyaan presets qalabka macruufka iyo TV Apple, si aad u dajiyaan karaa faylasha diinta Lugood si habsami leh oo iyaga u ciyaaro dhammaataan aad iPhone, iPod, iPad, Apple TV, iwm Halkan yimaado faahfaahsan.
Professional video Converter: Waxaa badasha VOB in Lugood, iyo sidoo kale kale qaabab video ka badan sida AVI, MP4, MKV, MOV, wmv in Lugood.
Wax soo saarka video tayada sare: Waxaad heli doontaa video ka badaley ee tayo sare leh, ilaalinteedu video tayada asalka gabi ahaanba.
Sida dhaqsaha badan Conversion Speed: Waxaad ku raaxaysan doonaa ahayd oo ololaysay video degdeg ah xawaaraha diinta.
Great qalab video tafatirka: Waxaad edit karaa file VOB aad la feature in-barnaamijka video tafatirka, abuuraya naftaada a movie guriga kaamil ah.
Sida loo badalo VOB in Lugood
1. VOB Load files
Gali DVD disk galay DVD drive aad, ka dibna ka heli files VOB aad ee galka ViDEO_TS. Si ay iyaga ugu soo dhoofsadaan in barnaamijkan, waxaad si toos ah u soo jiidi kartaa galka VIDEO_TS oo dhan si ay barnaamijka, ama la furo gal VIDEO_TS, oo mid baa mid ku soo qaado faylasha VOB ah. (Waayo, wakhtiga iyo walaac energe, aad kula taliyay in ay isticmaalaan xulashada ugu horeysay).
Ka dib markii dhammaan faylasha VOB keeno si guul ah, waxaad bedeli kartaa magaca faylka oo u daawado screen xaq previewing ah.
Riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo liiska hoos-hoos qaabka. Halkan waxaad si toos ah u dooran kartaa "M4V" ka "Qaabka"> "Video", ama doorato presets ee qalabka macruufka ka "Device"> "Apple" category.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad ku darto files diinta Lugood si toos ah, riix "Menu" icon> "rabtid"> "Beddelaan"> "Add files si Lugood Library qaab beddelidda kadib" .
Tweak aad goob : Haddii aad rabto in aad beddesho ee heerka muunad, xallinta, bitrates, iwm inay si fiican u qabtaan baahiyaha ciyaareed aad, waxaad riixi kartaa "Settings" doorasho si ay u helaan suuqa kala goobta.
3. Start VOB in ay diinta ka Lugood
Dhammaan diyaar garowga ayaa la dhammeeyey. Hadda riix "Beddelaan" badhanka si ay u bilaabaan si loogu badalo VOB in Lugood. Marka laga badalay dhameystirtay, aad si xor ah dajiyaan karaa faylasha diinta Lugood iyo wareejiyo iPad / iPhone / iPod xiriiri haddii loo baahdo.
Talooyin: Iyada oo ay taasi Video Converter , aad edit karaa files VOB istareexsan. Riix "Edit" in la furo suuqa kala Edit ah, halkan aad dib karaa bilaabi dhibcood iyo dhibic dhamaadka si loogu badalo qayb ka mid ah faylka, dalban 16: 9 ama 4: 3, noola laayeen madow, iyo codsan fur-in subtitles, watermarket, iwm video wareeji.
Fiiro gaar ah: MP4 sidoo kale waa mid ka mid ah Lugood taageeray qaabab video. Oo sidaas waa inaad u bedeli karaan si MP4 VOB halkii.
Qeybta 2: VOB Free in Lugood Converter & Online VOB in Lugood Converter
# 1. Free VOB in Lugood Converter: Wondershare Video Converter Free
Tani VOB si xor ah u Lugood video Converter waa dhamaystiran video qalabeed. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad badalo VOB in Lugood, xaalkaa videos in qaab kasta, oo kala soo bixi online videos.
Pro: VOB si xor ah u Converter Lugood aan watermark, qaabab kala duwan oo ay taageerayaan video
2. Waxaad kaliya u isticmaali karaa si loogu badalo files xawaare super soomi 10 jeer.
1. Waxa ay taageertaa diinta caadi videos, laakiin 3D iyo HD videos aan la heli karin.
3. Waxaad kaliya u isticmaali karaan si ay u soo bixi videos ka YouTube.
> Resource > Beddelaan > Sida loo Beddelaan iyo Import VOB in Lugood